Galaxy S7 + အတွက်ဤလှည့်ကွက် ၇ ခုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုများကိုမည်သို့မှတ်တမ်းတင်မည်နည်း Androidsis
Samsung Galaxy S7 Plus နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လှည့်ကွက် ၇ ခု
မင်းကိုသင်ပေးတယ် Samsung Galaxy S7 + တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လှည့်ကွက် ၇ ခု ဒါကသင့်ကို Android app ရဲ့ကင်မရာ app နဲ့မှန်ဘီလူးသုံးခုကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်မှာပါ။
နိုင်မှလှည့်ကွက် မှတ်တမ်းတင်နေစဉ်သုံးမှန်ဘီလူးကိုသုံးပါ သို့မဟုတ်ရွေ့လျားနေသောအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး သို့အလိုအလျောက်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့်လိုက်နာပါ။ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကိုဗွီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်အောင်လှည့်စားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ။
1 မှန်ဘီလူး ၃ လုံးကိုသင့်တော်သလိုသုံးပါ
2 လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလိုက်ရန် autofocus ကိုသက်ဝင်စေပါ
4 မှတ်တမ်းတင်နေစဉ် Super Steady mode
5 သက်ဝင်ကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုသင်၏ Galaxy S10 + ဖြင့်လွယ်ကူစွာမှတ်တမ်းတင်ပါ
6 Instagram ဗွီဒီယိုမုဒ်
မှန်ဘီလူး ၃ လုံးကိုသင့်တော်သလိုသုံးပါ
Galaxy S10 + သည် ဗီဒီယိုများရိုက်သောအခါအချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်မှန်ဘီလူးသုံးခုရှိသည်။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှန်ဘီလူးသုံးခုကို 30FPS မှာဗီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့အခါမှရနိုင်မှာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် 60 FPS (တစ်စက္ကန့်လျှင် frame) ကိုအသုံးပြုပါကမှန်ဘီလူးတစ်ခုစီအတွက်အိုင်ကွန်များကိုသက်ဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့ရွေးသည် 60FPS ထက်အခြားမည်သည့် resolution ကို mode ကို UHD နှင့် FHD နှစ်ခုလုံး။
လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလိုက်ရန် autofocus ကိုသက်ဝင်စေပါ
အရာဝတ္ထု / လူတစ် ဦး ကိုခြေရာခံရန် autofocus ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအချို့ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် အလွန်ကောင်းသောလယ်ကွင်းမှုန်ဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သားကိုလိုက်လိုသည့်အချိန်နှင့်သူ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်အမြဲအာရုံစိုက်နေသည့်အချိန်များအတွက်လည်းအကျိုးပြုသည်။
ဒီရွေးချယ်မှုကိုသတိရပါ 30 FPS ဖြင့် FHD စနစ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ သင် FHD 60FPS, UHD သို့မဟုတ် UHD 60FPS ကိုရွေးချယ်ပါက၎င်းကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်။
လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုနောက်သို့လိုက်ရန်အလိုအလျောက်ချိန်ခွင်ကိုဖွင့်ထားခြင်းအပြင်၎င်း mode ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ဘောင်ထဲမှာတိကျတဲ့အာကာသသည် ငါတို့ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုလိုသည်မှာကန့်သတ်ထားသောနေရာတွင်ပေါ်လာသည့်မည်သည့်အရာဝတ္ထုသည်မဆိုအာရုံထဲတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ငါတို့နှိပ်ပါ ကျနော်တို့အာရုံစူးစိုက်ချင်သောမျက်နှာပြင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာ အမြဲတမ်း။
ဘယ်ဘက်တွင်ထိုtoရိယာသို့အလိုအလျှောက်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော frame ကို activate လုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည့် icon တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းကိုရပ်တန့်ရန် အခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုကလစ်နှိပ်ပါ မျက်နှာပြင်။
မှတ်တမ်းတင်နေစဉ် Super Steady mode
Samsung Galaxy S10 ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုမှာရုတ်တရက်ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပင်လျှင် Super Steady mode ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည် တည်ငြိမ်အလုပ် အံ့သြဖွယ်လမ်းအတွက်။
ဒီ mode ကိုမှတစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကသာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကျနော်တို့ 30FPS အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမဆိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ activated ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်မေ့သွားနိုင်သည် 60 FPS UHD သို့မဟုတ် FHD မုဒ်။
ကြည့်ရှုသူ v ၌တည်၏ကျွန်တော်တို့ဟာလက်၏သင်္ကေတဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့က နှိပ်၍ Super Steady mode ကိုသက်ဝင်စေလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် 60FPS မှတစ်ခုဖြစ်လျှင် resolution ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
သက်ဝင်ကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုသင်၏ Galaxy S10 + ဖြင့်လွယ်ကူစွာမှတ်တမ်းတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည် ရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယ်လီဖုန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းကင်မရာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ animated GIF တွေကိုဝေမျှနိုင်ဖို့ဓာတ်ပုံ mode ကိုပြန်သွားရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Setting သို့သွားပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်ထားပါ
ကျနော်တို့ GIF mode ကိုရွေးပါ
ငါတို့ပြန်လာပြီ မြင်ကွင်းရှာဖွေသူနှင့်ရှပ်တာခလုတ်ကိုကိုင်ထားပါ ကာတွန်း GIF ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြီးပါပြီ။ ဒီပြခန်းထဲမှာကွန်ယက်တွေ (သို့) စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်တွေမှာမျှဝေဖို့အဆင်သင့်ရှိပါလိမ့်မယ်။
Galaxy S10 ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Instagram အထူးစနစ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သုံးသည့်အပြင်အမှန်တကယ်ထူးခြားသည့် Instagram Stories နှင့်အတူဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် Instagram အက်ပ်ကိုသွားပြီး Instagram Stories ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်မယ်ဆိုရင် Instagram အက်ပလီကေးရှင်းကိုတိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ resolution ဟာတိုးလာတယ်။ ဗီဒီယိုအရည်အသွေးပိုဆိုးလာ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ဘီလူးသုံးခုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုမည့်ကင်မရာအက်ပ်၏ Instagram mode ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါဆိုလိုတာက ကျွန်ုပ်တို့သည် telephoto mode၊ ပုံမှန် mode နှင့် wide angle ကိုသုံးနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Samsung Galaxy S10 ခွင့်ပြုထားသည့်အရည်အသွေးနှင့် resolution အားလုံးနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Instagram Stories များကိုပြုလုပ်ရန်။
Instagram Mode ကိုသွားတယ်။
Instagram Instagram ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
ငါတို့လွှတ်လိုက်၊ ကျနော်တို့ Instagram ကိုတိုက်ရိုက်သွားပါလိမ့်မယ် ကင်မရာအက်ပ်မှ။
7 သင်၏ Samsung Galaxy S10 ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လှည့်ကွက်များ သူတို့ကငါတို့ကိုပစ်ချရသောနွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွက်သင်သည်ဇိမ်ခံအတွက်လာလိမ့်မည်။ ဒီနှင့်အခြားဒီဗီဒီယိုကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် Galaxy S10 အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ သို့မဟုတ်ဒီတစ်ခုသင်ပြသရန် ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းကိုဘယ်လိုသုံးရမည်နည်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S7 Plus နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လှည့်ကွက် ၇ ခု
Pliq: Epic Clash သည် Tetris ကဲ့သို့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်